Magaalada Mandera oo lagu soo rogay bandow – The Voice of Northeastern Kenya
Magaalada Mandera oo lagu soo rogay bandow
Dowlada dalka ayaa maanta ku dhawaqday in Magaalada Mandera ay ku soo rogtay bandow habeenki ah taaso kadambeysay kadib markii laba maalin ka hor ay eheyd markii weerar ay dad ku dhinteen uu ka dhacay Magaaladaasi.
Wasiirka wasaarada arimaha iskuduwaha amaanka qaranka Joseph Nkaissery ayaa maanta arintaas ku shaaciyay gaazedka dowlada waxaana dadka lagu amray in guryaha ay ku xaroodan xiliyada habeenki ah..
Bandowgan ayaa ka dhigan in shacabka aysan kasoo bixin Karin guryahooda laga bilaabo 6.30 ee maqribnimo ilaa 06.00am ee subaxnimo taaso dhibaato ku noqon doonto shacabka deeganadaasi.
Caafiyowgan ayaa kadambeeyay kadib markii 12 lagu dilay weerar ka dhacay hotel lagu magacaabo Bishaaro halkaas oo la rumeysan yahay in dabley katirsan Alshabaab ay weerarkaas fuliyeen.
Joseph Nkaissery ayaa sheegay in bandwogan uu socon doono laga bilaabo maanta oo taariqdu heeyd 27 bisha October ilaa 27 bisha December taas oo ka dhigan in uu socon doono muddo 60 malmood ah.
Goobaha sida ba’an uu u saameyn doono bandwoga islamarkaana si adag indhaha loogu hayn doono ayaa kamid ah Magaalada Mandera, Omar Jillicow, Arabia, Fino, Lafey Kotulo, Elwak kuwaas oo 20km u jirto xadka kala qeybiyo Kenya iyo Soomaliya.
Dhanka kale gudoomiyaha maamul goboledka Mandera oo xaqiijiyay arintan ayaa sheegay in u jeedada bandowgaas uu yahay sidii amaanka Mandera lagu xoojin lahaa isagoo sheegay in weeraradii ugu dambeeyay ka dhaca Mandera aysan eheyn kuwa ay kadambeyan Alshabaab oo kali ah balse ay jiraan dad deeganka u dhashay oo la shaqeeya.
← Nin weerar ku qaaday safaarada Mareykanka ee dalka Kenya oo la togtay
Dowlada Nairobi oo muddo 72 saacadood ah u qabatay dhaqaatirta shaqo joojin ah in shaqadooda dib ugu labtaan →